Monica Juma : Kiiska Soomaaliya aad buu u jilicsanyahay - BBC News Somali
Image caption Monica Juma iyo Cawad
''Waxaa jirta sheeko la isugu sheekeeyo oo ah in Soomaaliya ay kiis adag leedahay oo ay iyada ku gacan sareeyo kiiska maxkmadda, laakiinse inaga taasi ma aaminsanin, sababtoo waxaan haysanaa kiis dhan walba ka adag, balse ma rabo in aan ka hor dhaco,'' ayay tiri Wasiirka Arrimaha dibedda ee Kenya.
Kenya waxa ay aad uga welwelsantahay kiiska badda ee maxkamadda horyaala, waxayna door bidi lahayd in wada hadal labada dal ay ku dhamaystaan arrimaha dhex yaala, waxayna wasiiradda sheegtay in Soomaaliya ay maxkamadda ku orodday ka hor intaanba wax la'is weeydiinin.
''Somaaliya iyadoon cid kaleba la hadal ayay markiiba maxkamad tagtay oo ah halkii ugu dambeysay mana aaminsani in taasi ay keeneyso xal waara'', ayay tiri Monica Juma.
Maxkamadda ICJ oo horay u go'aamisay inay dhageysan doonto dacwadda badda ee u dhaxeysa labada dal ayaa waxaa ka soo horjeeday Dowladda Kenya oo iyadu dooneysay in khilaafka lagu dhameeyo meel ka baxsan maxkamadda.
Inkstoo maxkamadda aysan si rasmi ah uga hadlin xiliga ka go'aan gaarista iyo waxa laga hadlayo ayaa dadka darsa arrimahaas waxay qabaan in la dhageysan doono waxa dhinacyada ay ku doodayaan.
Image caption Arrintan la xiriirta xuduudda badda ayaa dhalisay khilaaaf diblomaasiyadeed